किन उठेको छैन ६ दिनदेखि उपत्यकाको फोहोर ?
काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर ६ दिनदेखि सिसडोलमा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। सिसडोलका स्थानीयवासीले यही चैत १३ गतेदेखि उपत्यकाको फोहोर लग्न अवरोध गरेसँगै काठमाडौँमा फोहोर थुप्रिन थालेको छ।
विगत १३ वर्षदेखि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको नुवाकोटको सिसडोलस्थित ल्यान्डफिल साइटका बासिन्दाले प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयमा ५१ वटा शिक्षक दरबन्दी थप गर्नुपर्ने र प्रभावित सबै विद्यार्थीका लागि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने जस्ता माग राखेर अवरोध गरेका हुन्।
किन उठेको छैन ६ दिनदेखि काठमाडौंको फोहोर ?
यस विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्थानीयसँग छलफल गरिरहेको बताएको छ। ५१ जना शिक्षकको माग गरिएकामा २० जना शिक्षकको दरबन्दी दिने निर्णय काठमाडौं नगरपालिकालले गरिसकेको छ।
सिसडोलबासीको अवरोध : ६ दिनदेखि उपत्यकाको फोहोर उठ्न सकेन